WWE: Maxaa ka dhacay Dagaalkii Xoogweeynta Bandhiga Royal Rumble 2018? | Gooldhalin
WWE: Maxaa ka dhacay Dagaalkii Xoogweeynta Bandhiga Royal Rumble 2018?
Jan 29, 2018 - jawaab
Bandhigii lawada sugayay ee ciyaaraha WWE Royal Rumble 2018 wuxuu noqday bandhig saadaashiisa horay la heystay, maadaama natiijooyinka kasoo baxay ay dhowr Isbuuc ka hor ahaayeen kuwo suuqa yaalla – laakiin waa kuwo boqolkiiba 90 ay la dhacsan yihiin taageereyaasha Musaaricadu.
Ciyaaraha billadaha ee bandhigga isbixiska Royal Rumble 2018 waxaa kasoo baxay natiijooyinkii saadaasha lagu sheegay, maxaa yeelay walaalaha The Usos (Jimmy iyo Jey Uso) ayaa difaacday suunanka SmackDown Tag Team Titles markii ay laba tiris oo xiriir ah ka adkaadeen Chad Gable & Shelton Benjamin.
Rajo xumo iyo muran garsoor ayeyna riingaha uga baxeen Chad Gable & Shelton Benjamin kuwaasoo ku eedeeyey garsooraha inuu tiriskiisa seddaxda ah degdeg ahaa, ciyaartaan oo aheyd nuuca loo yaqaanno Two-of-three falls match (Waxaana guusha qaata kooxdii badisa laba ka mid ah seddaxdeeda wareeg ee mid walba tiriskiisa goonida loo xisaabiyo).
Kooxda The Usos Guuleysteyaasha welina ah SmackDown Tag Team Champions ayaana laba jeer oo xiriir ah adkaaday.
Dhanka kale, AJ Styles wuxuu difaacday suunka WWE Championship, isagoo ciyaar Handicap ah, uuna si cajiib ah uu u legdamay ku garaacay saaxiibada isku dhinaca ahaa Kevin Owens & Sami Zayn, wuxuuna ka tirsaday Kevin Owens.
Waxaa intaas sii dheer, Seth Rollins & Jason Jordan ayaa lumiyey suunanka RAW Tag Team Titles ee showga Isniinta Monday Night RAW ka dib markii ay guuldarro kala kulmeen kooxda The Bar: Sheamus iyo Cesaro.
Wixii intaas ka dambeeyey waxaa toos loo galay ciyaarta riinge iska bixiska ragga ee Men’s Royal Rumble, Rusev oo lambarka 1aad ahaa iyo Finn Balor oo lambarka 2aad ahaa ayaana ciyaartaan bilaabay.
37 sanno jirka u dhashay dalka Japan Shinsuke Nakamura (The king of strong style) oo lambarka 14aad kusoo galay ayaana ku guuleystay ciyaarta Men’s Royal Rumble ee sannadkaan 2018ka markii uu riingaha ka tuuray Roman Reigns oo lambarka 28aad kusoo galay, finalkana isla soo gaareen, waxaana uu ka tirsan yahay showga SmackDown Live oo Talaadada la daawado.
Taageereyaasha loo yaqaanno WWE Universe waxa keliya ee ay ka cajabeen ciyaartaan waxay aheyd soo laabashada ku guuleystihii Royal Rumble 2006 legdanyahanka fudfud ee lagu magacaabo Rey Mysterio.
Markii uu ku guuleystay ciyaarta Royal Rumble ee xuquuqda u siineysa u tartamista hal fursad oo suunka ugu sarreeya Musaaricada ah, Shinsuke Nakamura ayaa doortay inuu bandhig weynaha WrestleMania 34 kama dambeystiisa ku wajaho AJ Styles waxaana halkaas kasoo baxay dagaalkii riyada ee legdanyahannadaan magaca kusoo sameeyey New Japan Pro Wrestling.
Dagaalkii xoogweyneyaasha shirkadda WWE ee suunka Universal Champion una dhexeeyey Brock Lesnar (Horyaalka) vs. Braun Strowman vs. Kane waxaa ku adkaaday Suunkiisa Universal Champion-na difaacday Lesnar, guul nadiif ah ayuuna gaaray isagoo ka tirsaday Kane.
Balse ma qancin Braun Strowman oo weli aaminsan in haddii kaligi lagu dhaafo Brock Lesnar uu burburin karo, wuxuuna dhammaadkii ciyaartaan kula qeylinayey Lesnar ‘Ima garaacin aniga’.
Waxaa lasoo gaaray kama dambeysta bandhigga iyo ciyaartii la sugaayey ee hablaha Women’s Royal Rumble oo markii ugu horreysay taariikhda loo qabtay 30 hablood oo legdanyahanno ah sida ragga oo kale.
Sasha Banks noqotay taariikhda gabadhii ugu horreysay ee ciyaartaan riinge usoo gashay tiiyoo lambarka 2aad ay noqotay Becky Lynch.
Kanako Urai oo ku caan ah magaceeda riingaha ee Asuka (Monday Night Raw) ahna 36 sanno jir u dhalatay dalka Japan ayaa ku guuleysatay ciyaartii ugu horreysay ee Women’s Royal Rumble iyadoo kusoo gashay lambarka 25aad.
Balse iyadoo laga doonayey inay doorato midda ay wajaheyso WrestleMania 34 – horyaalka hablaha RAW Alexa Bliss ama dhiggeeda SmackDown Charlotte Flair – Waxaa Asuka qasay markii ugu horreysayna riingaha WWE lugaha soo geliyey feeryahannadii hore ee UFC Ronda Rousey oo ah 30 sanno jir u dhalatay Mareykanka.
Ronda Rousey ayaa farta ku fiiqday calaamadda WrestleMania, waxaana loo qaatay inuu ujeedkeedu yahay inay ciyaar ku lahaan doonto bandhigga weyn ee bisha April ee sannadkaan la qaban doono – sidaas darteed u badi inay Asuka wajado Bliss, halka la isku dhaafayo Rousey iyo Charlotte suunka SmackDown Women’s Title.
Ugu damebyntii, Ciyaartii dumarka ee riinga iska bixiska ayaa ka xiiso badneyd midda ragga marka lagu qiimeeyo halyeeyada dib usoo laabatay iyo wejiyada cusub, waxaana dib loo arkay mataanaha Nikki iyo Brie Bella (Iyadoo Nikki ay riingaha ka tuurtay walaasheed). Beth Phoenix, Jacqueline oo ah African-American-kii ugu horreeyey ee qaaday suunka hablaha musaaricada, Kelly Kelly, Vickie Guerrero iyo wejiyo kale.
© 2018 Gooldhalin - All rights reserved.